ဒါလေးတွေသိထားရင် ရေကူးလို့အသားအရည်ပျက်စီးမှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့… – Trend.com.mm
ရေကူးရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမကြာခဏလည်းရေကူးတတ်သူ၊အသားအရည်မပျက်စီးအောင်ဘယ်လိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းရမလဲမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်လေးတွေ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ရေကူးတာက သံသယ၀င်စရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၊အားကစားတစ်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ ရေကူးတဲ့အတွက် ကိုယ့်အသားအရည်မှာဘယ်လိုတွေထိခိုက်နိုင်လဲသိထားဖို့လိုပါတယ်။မကြာခဏရေကူးတတ်သူဆိုရင်
*pH Balance မညီမျှမှုကြောင့် ယားယံမှုတွေ၊ပွန်းပဲ့မှုတွေဖြစ်လာမယ်
ဒါတွေကတော့ ရေကူးမယ်ဆိုရင် ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်လေးတွေသိထားမယ်ဆိုရင် အသားအရည်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကို သူများတွေ ၂ဆလောက်ခံစားရချိန် ကိုယ်က ၁ဆလောက်ပဲကြုံရမှာပါ။အလွယ်တကူမပျက်စီးတော့ဘူးပေါ့။ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ??
*Waterproof sunscreen သုံးပါ
နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ခရင်မ်သုံးတာက အသားအရည်ပျက်စီးမှုကိုအထိုက်အလျောက်ကာကွယ်ပေးပြီးအသားအရည်ခြောက်သွေ့မှုမဖြစ်စေပါဘူး။ပုံမှန်ရေကူးသူဆိုရင် ဒီလိုခရင်မ်အမြဲသုံးပေးမှ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှေးကွေးစေမှာပါ။ရေမကူးခင် ၁၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီး အသားထဲထိ
ရေမကူးခင်ရေချိုးပါဆိုတော့ထူးဆန်းသွားလား?ဟုတ်ပါတယ် ရေကူးကန်ထဲမဆင်းခင် ရေမြန်မြန်လေးချိုးလိုက်တာက အသားအရည်ဆဲလ်တွေရဲ့အစိုဓာတ်ကို ပိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး နေလောင်ခံခရင်မ်လိမ်းထားတဲ့အပေါ်မှာပါ ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုသွားရှိစေပါတယ်။ရေကူးကန်ကရေကြောင့်
အသားအရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးက ရေများများသောက်ဖို့ပါပဲ။ဒါကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ရေမကူးခင် ရေများများသောက်ပေးတာက ရေဓာတ်ထိန်းပေးလို့အသားအရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ရေကူးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီအစိုဓာတ်၊ရေဓာတ်က ခြောက်သွေ့သွားမှာဖြစ်လို့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်အတွက် ရေများများပြန်သောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
အလုပ်တွေရှုပ်လိုက်တာဆိုတာထက်ကို ကိုယ်ကမကြာခဏရေကူးနေသူဆိုရင်ပိုပြီးတောင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။သတိမထားလိုက်တာနဲ့ အသားအရည်ကထိန်းလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ရေကူးပြီးတဲ့အခါ ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ရေချိုးပေးပါ။ဒါက ချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်စေလို့ အသားအရည်အတွင်းပိုင်းထိသန့်စင်ပေးပါတယ်။Anti-chlorine soap နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်စင်ပါ။ခေါင်းလည်းသေချာလျှော်ပါ။ပြီးရင် ရေအေးနဲ့ပြန်လည်ချိုးပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ပြန်ပြီးတင်းရင်းစေပါ။ဒီလိုလုပ်ပေးတာက အသားအရည်အစိုဓာတ်မဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ရေမကူးတဲ့လူတွေတောင် အမြဲတမ်းဒီခရင်မ်တွေလိမ်းနေရတာပါ။ရေကူးတဲ့သူဆိုရင် မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်ရေချိုးပြီးတိုင်း လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှ အသားအရည်ပျက်စီးမှု၊ခြောက်သွေ့မှုမဖြစ်ပဲ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးမှာပါ။ဒီလိုခရင်မ်လိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်နဲ့တကယ်ကိုက်ပြီး ကိုယ့်အတွက်တကယ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့အစိုဓာတ်ထိန်းခရမ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့မမေ့ပါနဲ့
ရေကူးဝတ်စုံကိုသေချာသန့်စင်အောင်လျှော်ဖွပ်ပေးတာကအသားအရည်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ရေကူးတဲ့အခါမှာ ကလိုရင်းဓာတ်တွေကြောင့်ရေကူးဝတ်စုံကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ရေကူးဝတ်စုံကိုလျှော်ဖွပ်တော့မယ်ဆိုရင် ရှာလကာရည်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာလောက်
ထည့်ပြီးလျှော်ပေးပါ။အဲ့ဒါက ကလိုရင်းနံ့ကိုပျောက်စေပြီး အရောင်လည်းမလွင့်စေပါဘူး။
*Herbal Tea သောက်ပါ
Herbal Tea ကိုမနက်တိုင်းသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုပုံမှန်သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရည်ဆဲလ်တွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ဆဲလ်တွေကိုပါ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အသားအရည်လေးမပျက်စီးချင်ဘူး။အမြဲထိန်းသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာ Green Tea ဖြစ်စေ Moringa Tea ဖြစ်စေ သောက်ပေးပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ရကေူးရတာကိုကွိုကျနှဈသကျပွီးမကွာခဏလညျးရကေူးတတျသူ၊အသားအရညျမပကျြစီးအောငျဘယျလိုစနဈတကထြိနျးသိမျးရမလဲမသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ အသားအရညျထိနျးသိမျးမှုဆိုငျရာအခကျြလေးတှေ ပွနျပွီးမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ပွောခငျြတာကတော့ ရကေူးတာက သံသယဝငျစရာမလိုလောကျအောငျ ကောငျးမှနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး၊အားကစားတဈမြိုးပါ။ဒါပမေဲ့ ရကေူးတဲ့အတှကျ ကိုယျ့အသားအရညျမှာဘယျလိုတှထေိခိုကျနိုငျလဲသိထားဖို့လိုပါတယျ။မကွာခဏရကေူးတတျသူဆိုရငျ
*pH Balance မညီမြှမှုကွောငျ့ ယားယံမှုတှေ၊ပှနျးပဲ့မှုတှဖွေဈလာမယျ
ဒါတှကေတော့ ရကေူးမယျဆိုရငျ ရလာနိုငျတဲ့အကြိုးဆကျတှပေေါ့။
ဒါပမေဲ့ ဒီအခကျြလေးတှသေိထားမယျဆိုရငျ အသားအရညျပကျြစီးမှုဒဏျကို သူမြားတှေ ၂ဆလောကျခံစားရခြိနျ ကိုယျက ၁ဆလောကျပဲကွုံရမှာပါ။အလှယျတကူမပကျြစီးတော့ဘူးပေါ့။ဘယျလိုကာကှယျရမလဲ??
*Waterproof sunscreen သုံးပါ
နရေောငျခွညျဒဏျကာကှယျပေးတဲ့ခရငျမျသုံးတာက အသားအရညျပကျြစီးမှုကိုအထိုကျအလြောကျကာကှယျပေးပွီးအသားအရညျခွောကျသှမှေု့မဖွဈစပေါဘူး။ပုံမှနျရကေူးသူဆိုရငျ ဒီလိုခရငျမျအမွဲသုံးပေးမှ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုနှေးကှေးစမှောပါ။ရမေကူးခငျ ၁၅မိနဈလောကျအခြိနျယူပွီး အသားထဲထိ
ရမေကူးခငျရခြေိုးပါဆိုတော့ထူးဆနျးသှားလား?ဟုတျပါတယျ ရကေူးကနျထဲမဆငျးခငျ ရမွေနျမွနျလေးခြိုးလိုကျတာက အသားအရညျဆဲလျတှရေဲ့အစိုဓာတျကို ပိုထိနျးသိမျးပေးနိုငျပွီး နလေောငျခံခရငျမျလိမျးထားတဲ့အပျေါမှာပါ ပိုပွီးအကြိုးသကျရောကျမှုသှားရှိစပေါတယျ။ရကေူးကနျကရကွေောငျ့
အသားအရညျနဲ့ပတျသကျပွီးအကောငျးဆုံးက ရမြေားမြားသောကျဖို့ပါပဲ။ဒါကိုအားလုံးလညျးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ရမေကူးခငျ ရမြေားမြားသောကျပေးတာက ရဓောတျထိနျးပေးလို့အသားအရညျနဲ့ပတျသကျပွီး ကာကှယျပွီးသားဖွဈစပေါတယျ။ရကေူးလိုကျတဲ့အခါမှာ ဒီအစိုဓာတျ၊ရဓောတျက ခွောကျသှသှေ့ားမှာဖွဈလို့ ကုနျဆုံးသှားတဲ့ရဓောတျအတှကျ ရမြေားမြားပွနျသောကျပေးဖို့လိုပါတယျ။
အလုပျတှရှေုပျလိုကျတာဆိုတာထကျကို ကိုယျကမကွာခဏရကေူးနသေူဆိုရငျပိုပွီးတောငျသတိထားဖို့လိုပါတယျ။သတိမထားလိုကျတာနဲ့ အသားအရညျကထိနျးလို့မရအောငျပကျြစီးသှားနိုငျပါတယျ။ရကေူးပွီးတဲ့အခါ ရခေပျနှေးနှေးလေးနဲ့ရခြေိုးပေးပါ။ဒါက ခြှေးပေါကျတှကေိုပှငျ့စလေို့ အသားအရညျအတှငျးပိုငျးထိသနျ့စငျပေးပါတယျ။Anti-chlorine soap နဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုသနျ့စငျပါ။ခေါငျးလညျးသခြောလြှျောပါ။ပွီးရငျ ရအေေးနဲ့ပွနျလညျခြိုးပေးပွီး ခြှေးပေါကျတှကေို ပွနျပွီးတငျးရငျးစပေါ။ဒီလိုလုပျပေးတာက အသားအရညျအစိုဓာတျမဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။
ရမေကူးတဲ့လူတှတေောငျ အမွဲတမျးဒီခရငျမျတှလေိမျးနရေတာပါ။ရကေူးတဲ့သူဆိုရငျ မနကျတဈကွိမျ ညတဈကွိမျရခြေိုးပွီးတိုငျး လိမျးပေးသငျ့ပါတယျ။အဲ့ဒါမှ အသားအရညျပကျြစီးမှု၊ခွောကျသှမှေု့မဖွဈပဲ အစိုဓာတျထိနျးပေးမှာပါ။ဒီလိုခရငျမျလိမျးတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျနဲ့တကယျကိုကျပွီး ကိုယျ့အတှကျတကယျထိရောကျမှုရှိတဲ့အစိုဓာတျထိနျးခရမျကိုရှေးခယျြဝယျယူဖို့မမပေ့ါနဲ့
ရကေူးဝတျစုံကိုသခြောသနျ့စငျအောငျလြှျောဖှပျပေးတာကအသားအရညျထိနျးသိမျးတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ရကေူးတဲ့အခါမှာ ကလိုရငျးဓာတျတှကွေောငျ့ရကေူးဝတျစုံကိုထိခိုကျပကျြစီးစပေါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ရကေူးဝတျစုံကိုလြှျောဖှပျတော့မယျဆိုရငျ ရှာလကာရညျစားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးစာလောကျ
ထညျ့ပွီးလြှျောပေးပါ။အဲ့ဒါက ကလိုရငျးနံ့ကိုပြောကျစပွေီး အရောငျလညျးမလှငျ့စပေါဘူး။
*Herbal Tea သောကျပါ
Herbal Tea ကိုမနကျတိုငျးသောကျပေးမယျဆိုရငျ အသားအရညျနဲ့ပတျသကျပွီးကောငျးမှနျစပေါတယျ။ဒီလကျဖကျရညျကိုပုံမှနျသောကျပေးမယျဆိုရငျ အသားအရညျဆဲလျတှကေို အထောကျအကူဖွဈစပွေီး ပကျြစီးသှားတဲ့ဆဲလျတှကေိုပါ ပွနျလညျပွုပွငျပေးနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အသားအရညျလေးမပကျြစီးခငျြဘူး။အမွဲထိနျးသိမျးခငျြတယျဆိုရငျ မနကျပိုငျးမှာ Green Tea ဖွဈစေ Moringa Tea ဖွဈစေ သောကျပေးပါလို့အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
“ဆောင်းဦးရွက်ကြွေချစ်သက်သေ”လိုဇာတ်ကားမျိုးထပ်ရိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ Song Seung Heon